Ebe nlegharị anya njem nlegharị anya nke ụwa gbara mbọ na mgbake nke njem nlegharị anya nke Haiti
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Haiti » Ebe nlegharị anya njem nlegharị anya nke ụwa gbara mbọ na mgbake nke njem nlegharị anya nke Haiti
Akụkọ Haiti • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Nkwado maka mgbake njem nlegharị anya na Haiti
Na nzukọ izizi emere taa, ndị otu ndị ọrụ nchekwa njem nlegharị anya, mgbake na nkwado siri ike ekwela nkwado ha zuru oke iji nyere Haiti ala ọma jijiji aka. Onye minista na-ahụ maka njem nlegharị anya na onye-nchoputa Global Resilience Resilience na Crisis Management Center (GTRCMC), Hon. Edmund Bartlett, kwuru na ngagharị a na -eme ka mkpebi siri ike mee ka mgbake na nkwụsi ike nke ngwaahịa njem nlegharị anya nke Haiti dị ngwa.
Na nzukọ a, a tụlere ụfọdụ mkpa ndị Haiti ozugbo na nke kachasị mkpa imepụta matriks iji kwado nchịkọta na nkesa ihe ndị a.
Ndị ọrụ ahụ kwupụtara usoro ndị ọzọ nke gụnyere GTRCMC na -ahazi ihe niile dị na mbọ mgbake ahụ.
GTRCMC ga -arụkọ ọrụ na ndị nwere njem njem n'ụwa niile iji kwado Haiti.
"Enwere m obi ụtọ na njikọta ahụmịhe na nka nke ndị ọrụ a dị elu ga-enwe ike ịmalite itinye usoro na usoro achọrọ iji nyere ndị Haiti aka ịmalite ụzọ mgbake ha. Site na nzukọ nke taa, anyị nwere ike ikwurita ụfọdụ mkpa ndị Haiti ozugbo na nke kachasị mkpa ịmepụta matriks iji kwado nchịkọta na nkesa ihe ndị a, "Minista Bartlett kwuru.
Ndị ọrụ ahụ kwupụtara usoro ndị ọzọ nke gụnyere Resilience njem nlegharị anya nke ụwa na ebe nlekọta nsogbu na -ahazi ihe niile dị na mbọ mgbake ahụ; na -arụ ọrụ na ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya n'ụwa niile na -akwado Haiti; iguzobe kọmitii okpuru ọchịchị iji leba anya n'akụkụ dị iche iche nke mgbake ndị njem; inye nkwado nka na ụzụ.
“Enwere m ọ heartụ n'ezie maka nkwado dị ukwuu nke ndị otu ọrụ na -enye. Anyị nwere mmetụta nke mmụọ na Haiti nyere anyị ịdị nso anyị. Anyị bụ akụkụ nke ala ahụ niile n'ihi na ihe na -emetụta ha na -emetụtakwa anyị, "Minista Bartlett kwukwara.
Ndị ọrụ ọrụ ahụ kwenyekwara na a ga -enwe nhazi maka nkwukọrịta; nlekota na nyocha; mkpokọta akụ na njikwa; na nguzogide njem.
Hon LK Cassandra Francois, onye minista na -ahụ maka njem nlegharị anya na Haiti, kelere ndị otu niile na -arụ ọrụ wee sị, "Enwere m nnukwu ekele maka nkwa inyere Haiti aka na ịdị n'otu a, obodo a ga -agbake ngwa ngwa n'agbanyeghị ọdachi a."
N'ịkọwapụta mkpa ọ dị Mgbake njem nlegharị anya nke HaitiOnye isi oche nke GTRCMC kwuru, sị, "Covid egosipụtala nnukwu onyinye nke njem na akụ na ụba mba, yabụ na mgbake njem nlegharị anya nke Haiti ga -adị oke mkpa maka ọdịnihu Haiti, anyị ga -eme ihe ngwa ngwa."
Taskforce, nke akwadoro izute ọzọ n'izu na-abịa, agbakwunyere osote onye isi oche nke Caribbean Hotel na Tourist Association (CHTA), Nicola Madden-Grieg na onye ọchụnta ego ụwa na onye ọchụnta ego, Morten Lund.